kuongorora kwekuongorora muagile
Kuru Agile Kuongorora Kwakaedzwa muAgile
Kwayedza Yekuongorora chiitiko chakakosha munzvimbo inonamira sezvo ichigona kubatsira vanoedza software kuti vafambirane nekukurumidza kukurumidza kumhanya kweanogadzira software mapurojekiti.
Kutanga, chirevo chipfupi pane agile nzira uye kuongorora kwekuongorora:
Mune agile methodology, software inoburitswa mune diki iterations. Imwe neimwe iteration inoenda kuburikidza nekuronga, fungidziro, kuvandudza, kusangana, kuyedza uye kuburitsa. Nekuda kwekuburitswa kuburitswa, bvunzo otomatiki inova yakakosha zvakanyanya sezvo vanogadzira vachida kuwana nekukurumidza mhinduro pamusoro pechimiro chekushandisa. Iwo otomatiki macheki anoshanda senge regression bvunzo kuona kuti neese kuburitsa software haina kudzoka.
Kwayedza Kuedza kunotsanangurwa sekudzidza panguva imwe chete, kuyedzwa dhizaini uye kuitiswa kwekuedzwa. Iyo nzira yekuyedza iyo inokoshesa muyedzo sechikamu chakakosha cheyedzo yekuyedza uye inogovera iwo iwo maitiro akafanana neiyo Agile Manifesto:
Vanhu uye kudyidzana pamusoro pezvakaitwa uye maturusi
Kushanda software pamusoro pezvakakwana zvinyorwa
Kubatana kwevatengi pamusoro pekutaurirana kwechibvumirano
Kupindura kuchinja pamusoro pekutevera chirongwa
Kwayedza Yekuongorora zvakare kunowirirana kuyedza otomatiki; ndizvozvo apo otomatiki macheki ari kutarisa zvekupinda mumatambudziko, Kuongorora kwekuongorora kunotarisa pazvinhu zvitsva zvakagadzirwa. Izvi zvakakosha nekuti sprint imwe neimwe inowanzoita mavhiki mashoma chete, izvo zvisingabvumidze nguva yakaringana yekunyora zviitiko zvekuyedza uye kuzviita gare gare zvichipesana nechishandiso. Kune rimwe divi, kuyedza kuyedza munzvimbo isingabvumike kunotendera vanoedza kuti vazive domeini nekushandisa uye pane imwe neimwe iteration, iko kunzwisiswa kunosimbiswa uye nokudaro vaedzo vanowedzera kushanda.
Maererano ne Brian Marick yekuyedza quadrant , kune mativi maviri ekuyedza, ayo anotsigira chirongwa, kureva kutsigira kunyora kodhi (zviyedzo zveyuniti) kana kupa chiratidzo chekuti programmer inogona kupedzwa riini (bvunzo dzekubvuma) uye neaya anoongorora chigadzirwa, kureva. chigadzirwa nechinangwa chekutsvaga kusakwana. ' Iko pano, munzvimbo yekushoropodza chigadzirwa, uko kuongorora kwekuongorora kunogona kutora chinzvimbo chakakura muchirongwa cheagile.
Mune mapurojekiti akaomarara, bvunzo dzinotsigira zvirongwa dzinowanzoitwa nevagadziri uye dzinowanzo gadzirirwa uye chiratidzo chekuitwa kubva kune iyo programmer yekuona, nepo bvunzo dzekutsvagisa dzakanangana nekuwana nyaya dzinogoneka dziri pamusoro peyakangoitwa otomatiki bvunzo. Vanoongorora vanotsvaga vanotarisa kunzvimbo dzinogona kuvhenekwa bvunzo dziripo.
Vanoshanda vanobvunzurudza testers vanoshanda pane agile mapurojekiti vanoshandisa matekiniki ekutsvagisa kuyedza kubatsira kuzivisa iyo projekiti timu nezve zvingangoitika nenyaya nechigadzirwa. Kuedzwa kwavo kunogona kusarongeka uye vakasununguka kana kutarisirwa vachishandisa maratidziro uye zvikamu zvekuyedza. Zvakare nekuda kwenhambo pfupi dzebudiriro, kuyedza zvakasikwa kunova nenjodzi yakavakirwa, uye kuyedza kuongorora kunogona kutarisa munzvimbo dzine njodzi kuti uwane matambudziko anogona.
Maitiro eAgile uye kuyedza kuongorora inzira dzekubatsira idzo, kana dzikashandiswa pamwechete, dzinogona kuumba kubatana kwakanakisa mukati mechiitiko chekuyedza.
Akanakisa Samsung Galaxy S21 Ultra makesi
Mashandisiro ekushandisa vhoriyamu mabhatani ekuzeza kana kudzinga maalarm (Android)
Akanakisa makesi akaomeswa eApple iPhone 6s - chengetedza izvo & apos; vadikani
Samsung Galaxy S6 kumucheto Ongororo
15 mitambo yakavhurika yepasirese ine hukuru hukuru hweiyo Android uye iOS
Yakanakisa isina kuvhurwa uye inotakura pafiripi mafoni nemafoni ekutanga aunogona kutenga izvozvi